Soo-saareyaasha Alaabada - Shiinaha Alaab-qeybiyeyaal & Warshad
Dhagaxa Dhagaxa ayaa ah geedi socod lagu sifaynayo laguna qeexayo marble dabiici ah qaab dhismeed qurxan iyo farshaxan. Marka la barbardhigo qaybaha birta ah ee birta ah ee 3D ama wixii kale ee 3D ah ee ka samaysan dhoobada, dhalooyinka, caagga iwm, alaabada dhagaxa ah ee dabiiciga ah ayaa lagu qiimeeyaa muuqaalkeeda casriga ah & tan caadiga ah. Iyada oo sanado badan la urursanayay farsamooyinka gacanta oo la isku darayo horumarkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda CNC, alaabada dhagaxa Carvings waxay muujinayaan soo jiidashadeeda casriga ah iyo soo jiidashadeeda qadiimiga ah.
Marble Inlay ayaa balaarisay quruxda alaabada marmarka. Si loo sameeyo gabal qurxoon oo ah badeecada marmarka la mariyo, waxaan u baahanahay marka hore koox tayo sare leh oo naqshadeynta iyo soo iibinta dukaanka ah, tani waa talaabada aasaasiga ah laakiin muhiimka ah. Kooxdayada si wanaagsan u tababaran oo khibrad leh waxay hubiyaan inaanan kaliya ka soo dejineynin xogta macmiilka, laakiin sidoo kale aan leenahay awooda naqshadeynta, isla markaana waxay bixisaa sawir bixin ku saleysan naqshadeynta si loo helo isku dhafka ugu fiican ee midabka iyo qoto-dheer dukaanka si loo hubiyo filasho iyo alaab sifiican loo sharaxay. Qodobka labaad ee muhiimka ah waa mashiinka biyaha-jet ee CNC. Mashiin tayo sare leh oo sifiican loo dayactiray shaki kuma jiro xuddunta adag ee alaabta ganaaxa iyo habsami u socodka. Mar saddexaad, hawlwadeenkeenna loogu talagalay matoorka-biyaha ee loo yaqaan 'CNC-jet-jet' wuxuu si fiican u bartay ma aha oo kaliya sida loo maareynayo mashiinnada, laakiin sidoo kale astaamaha kala duwan ee noocyada dhagxaanta. Hawl wadeenadan mas'uulka ka ah, oo leh wacyigelin heer sare ah iyo fahamka shaqada loo igmaday ayaa ah ragga muhiimka u ah wax soo saarka saxda ah. Gawaarida marmar, xulashada ech ee dhagxaanta dhagxaanta, milimetre kasta ayaa lagu tiriyaa natiijada ugu dambeysa.
Marble mosaic waxaa dib loo raadin karaa kun sano ka hor taariikhda qurxinta aadanaha. Shaqadeedu waa fidinta maskaxda aadanaha. Waxay noqon kartaa mid firfircoon sida gabadha oo kale; waxay u noqon kartaa sida Classical sida da'da Dunida; waxayna noqon kartaa mid jilicsan sida rinjiyeynta Da Vinci. Socodka laga bilaabo waqtigii hore ilaa waqtiga casriga ah, waxay dhaaftaa dhaxalka dhaqanka aadanaha iyo ruuxa, maalmahanna, wali waa mid ka mid ah wax soo saarka ugu caansan ee naqshadeeyayaasha iyo adeegsadayaasha dhammaadka ah.
Dhagaxa Dhagaxa ayaa ah geedi socod lagu sifaynayo laguna qeexayo marmar dabiici ah qaab dhismeed qurxan iyo farshaxan. Marka la barbardhigo qaybaha birta ah ee birta ah ee 3D ahama ama noocyo kale oo 3D ah oo ka samaysan dhoobada, dhalooyinka, caagagga iwm, alaabada Dhagxaanta dabiiciga ah waxaa lagu qiimeeyaa muuqaalkeeda casriga ah & tan caadiga ah Iyada oo kumanaan sano ah oo la uruurinayo farsamooyinka gacanta oo isku daraya horumarka tikniyoolajiyadda, alaabada dhagaxa Carvings waxay muujinayaan soo jiidashadeeda casriga ah iyo soo jiidashadeeda qadiimiga ah.